I-Tattoo ye-Lip - I-24 i-Tattoos i-Best Tattoos I-Ideal ye-Men For Women & Tattoos
I-Tattoo yeLimi - I-24 I-Tattoos ye-Lip Best i-Ideal For Men and Women
sonitattoo Agasti 26, 2016
Ngaba ubonile umboniso womlomo ngaphambili? Ewe, ukuba awuzange uyibone enye, mhlawumbi, lixesha lokuba ubone ezininzi zezi tatto ezinomlomo. Le tattoo kuphela yeentliziyo ezinesibindi abazama ukuxelela ibali ngendlela engabonanga ngayo umntu ngomntu.
Izindebe zivame ukusetyenziswa ngabafazi ukuba bathethe ngokusondeleyo kunye nomsebenzi ongenangqondo. Iyakwazi ukupenda ngemibala eyahlukeneyo, inzondelelo okanye iphethini. Imilomo ebomvu ingasetyenziselwa ukuthetha ngokukrakra nokubambana ngesondo xa iinki kwiindawo ezithandana nesisu, izigqoko, intamo, njl. Le nto ingafakwa kwiindawo ezininzi zomzimba eziya kushiya ukucinga. Imilomo ebomvu ezayo ngolwimi ingasetyenziselwa ukudibaniswa nokusebenzelana nemimoya. Imilomo ebomvu ingasetyenziselwa ukuthetha ngeengqungquthela zomsindo kunye nemvelo. Kwakhona uthetha ngeentetho ze-tabs ongazinxulumana nayo.
Xa umlomo uvuliwe, ungasetyenziselwa ukuthetha nge-counterculture. Imilomo isetyenziselwa ukumela ubudlelwane. Umlomo ungasetyenziselwa ukubonisa abantu ngesimboli esithandanayo. Ukuba ulungele ukubonisa uthando lwakho okanye ukuthetha kwinqanaba elilandelayo, umlomo ungasetyenziselwa ukuxelela ibali lakho.
Ukubekwa kwe tattoo yakho ye-#lip yintoni echaphazela ubuhle kunye neendleko kakhulu. Indawo oya kuyo inki uyilo lwakho luleke kakhulu. Kukho indawo apho kunokuba nzima khona apho itekisi yakho yomlomo ingaba nzima ukuyifumana.
Umlomo othakazelisayo umbala
Icandelo elithembekileyo lomzimba likwabekwa indawo apho iifoto zomlomo zingabi nexabiso kwaye zithathe ixesha elide.
Izindebe zomlomo zetekisi
Umlomo #tattoo design ingaba lula okanye iyinkimbinkimbi kuxhomekeke kwinto okhangeleyo. Unokwenza ukuba wenze umtsalane wakho ngomlomo ukuba ukhangele ngendlela enhle njengale.
Cute tat tattoo
Akufanele ulibale ukuba indawo yendawo yokubaluleka ibalulekile. Iindleko zomlomo wakho tattoo ziza kuthintela kakhulu kwindawo.
Umlomo we-tattoo ngomlomo
Iipilisi ezisezitrato ezizityebi kunye nezixeko ziya kuba kubi kakhulu xa kuthelekiswa nazo zifumaneka kwezinye iindawo. Abaculi bayazi ukuba abo bahlala kwiindawo eziphambili bavame ukuhlawula ngaphezulu kwaye bahlawula ngaphezulu.
Smile izindebe zomlomo
Xa ulungele ukufumana le tattoo yomlomo, qiniseka ukuba wenze kakuhle uphando lwakho. Uninzi lwabantu basemgwaqweni ngenxa yokuba behlulekile ukufumana umbala we-tattoo ngomlomo ngenxa yephutha lomculi abaqashileyo.
Abantu ngoku basebenzise abaqeqeshi ukuba bafumane loo tattoo yomlomo abayifunayo.
I-Skull lips tattoo
Akukho buxoki ekuthetheni ukuba umlomo we tattoo uye waba yinto ebalulekileyo yamadoda kunye nabasetyhini emhlabeni jikelele.
Siyabona abantu abaninzi abaneempawu zomlomo kunamashumi eminyaka adlulileyo ngenxa yobuchule obuza ne tattoo yomlomo.
Ukuthandwa kunye nezinto ozikhethile ziba zizinto ezibini ezichaphazela uhlobo lwe tattoo lomlomo onokukhetha. Iindleko yinto abantu bokuqala bayayiqwalasela ngaphambi kokuba bahambe ngeenkino. Ukuba awukwazi ukufumana le tattoo yomlomo, akunakukhetha ukukhetha. Ungabhala nantoni na ovakalelwa ngayo emlonyeni
I-tattoo yomlomo iye yaba enye yezinto eziphathekayo zefashini esizibonayo kwiimpawu zamadoda nabasetyhini. Kukho iintsuku xa uthabatha umlomo we-tattoo kubhekwa njengethambo. Kulo lonke ihlabathi, abantu baye bafumana ubuhle kunye nesigidimi sokuthi imizobo yomlomo ingasetyenziselwa ukudlula. umthombo wesithombe
Lip Lip Tattoos
Thatha umzekelo, uvakalelwa njani ukuba nomfanekiso wethambo oluhle kangaka? Lo mnye umlomo we tattoo oye waba ngumkhwa ngaphezu kweminyaka. Abaninzi bethu baye baqonda imisebenzi yemisebenzi emangalisayo esiyifake kwiindawo ezahlukeneyo zomzimba wethu ukuze kusikhumbuze ngoku, esidlulileyo nakwixesha elizayo. umthombo wesithombe
Uthando lwePil Tattoos
Ubugcisa be tattoo bube yinye yefomu yobugcisa obudala eye yacatshulwa ngabantu. Ubugcisa bube yindlela yokubonakalisa okanye isenzo sokuvukela kuxhomekeke kwinto esetyenziswa ngayo. Kukho abantu abasebenzisa tattoo njengendlela yokugcoba. umthombo wesithombe
I-Lip Tattoo ekhethekileyo
Othandayo Lip Tattoo
I-Ladies Lip Tattoos ephezulu
Amandla Umlomo Wezandla
Le mihla iifoto zomlomo ziqhelekile ukuba sizibona phantse omnye kumntu abane. Imizobo yomlomo yimisebenzi yobugcisa eye isetyenziselwa ukumela izinto ezininzi nokuthetha ngabantu. umthombo wesithombe
I-Lip Tattoo enoMandla
Uninzi lwabantu luye lwazisola ngokuba neempawu zomlomo ngenxa yokuba abazange balidlale. umthombo wesithombe
Ubuhle bombhobho womlomo buya kukwaziswa kuphela xa iin inkxwaba eninzi kuwe. Inxalenye yomzimba apho udinga umlomo we tattoo ibaluleke kakhulu. umthombo wesithombe
Oku kungenxa yokuba uya kufihla okanye utyhilele umhlaba ukuze ubone. umthombo wesithombe
izifuba zesifubaizithunywa zezuluIintyatyambo zeTattootatto flower flowertattoo engapheliyoIndlovu yeendlovutattoocute tattoostatto tattoostattoo yedayimaniowona mhlobo womhlobozinyonitattoosiimpawu zezodiac zempawuizigulanetattoiifoto eziphakamileyoihoi fish tattootattoo yamehloI-Ankle Tattoosiidotitattoos zohlangai-tattoostatna tattoobathanda i tattoostattoosukutshiza amathambozomculo tattoostattoos kumantombazanautywala tattootattoos ezinyawoi-cherry ityatyamboiipattoostattoos zenyangatattoosiifatyambo zeentyatyambotattoos zelangai tattoosibiningesandlaTattoos zeJometritattoodesign mehndiiifotto zentamotattooszengalo zengaloIintliziyo zeTattoostattoos kubantungombonoicompass tattoo